23 Askarta Galmudug Ah Oo Ku Dhintay Duqayn Ay Diyaaradaha Maraykanku Ka Gaysteen Gaalkacayo | SDWO.COM & SomalilandNews.net
23 Askarta Galmudug Ah Oo Ku Dhintay Duqayn Ay Diyaaradaha Maraykanku Ka Gaysteen Gaalkacayo
Gaalkacayo (SDWO.com): In ka badan 23 askari oo ka tirsan ciidamadda maamulka Galmudug ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen duqayn xagga cirka oo ay saaka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanku ka fuliyeen duleedka magaaladda Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waxa kale oo la sheegay in kontomeeyo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay saaka waaberigii diyaaradaha Maraykanku ka fuliyeen meel fadhiisin u ah ciidamadda maamulka Galmudug oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaaladda Gaalkacayo.
Maamulka Galmudug ayaa duqayntaasi waxa uu ku eedeeyay in ay ka danbeyeen maamulka Puntland, sida uu idaacadda BBC u sheegay wasiirka amniga gudaha ee maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur, oo loo yaqaano Taar-dhuleed.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in afar baabuur oo ku sugnaa xeradaasi ay diyaaraduhu duqeeyeen in ay halkaasi ku bur-bureen.
Cismaan Taar-dhuleed, ayaa ku eedeeyay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamadda maamulka Puntland ee loo yaqaano SP-ta, isagoo ku tilmaamay u jeedadda ay Puntland ka lahayd in ay Al-shabaab ku sheegto ciidamadooda fal cadow tinimo oo ay ku kaceen Puntland.
Sidoo kale wararka la xidhiidha arrintaasi ayaa tibaaxaya in khasaare badan oo hantiyeed uu gaystay weerarkaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan bur-burka guryo ka ag dhawaa xeradda ay ciidankaasi deganaayeen.
Geesta kale diyaaradahan Maraykanka ee weerarka dadka badani ku dhinteen ka fuliyay magaaladda Gaalkacayo ayaa la sheegay in ay bar-tilmaameedsanayeen Al-shabaab, hase yeeshee waxay Galmudug ku doodayaan in Puntland ay soo hagayeen diyaaradahaasi.
Dhinaca kale maamulka Putland ayaan weli ka jwaabin eedahan ay u soo jeediyeen maamulka Galmudug, ee la xidhiidha in ciidamadoodu ay diyaaradahan ku soo hagayeen saldhigan ay deganaayeen ciidamadda Galmudug.
Ugu danbayn dawladda Maraykanka ayaana iyadna ka hadal weeraradan la sheegay in diyaradahooda aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Drones-ka ay ka gaysteen magaaladda Gaalkacayo.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkan ay saaka diyaaradaha Maraykanku ka fuliyeen Gaalkacayo ayaa la sheegay in ay markii hore ula dan lahaayeen in ay duqeeyaan Al-shabaab oo laga dareen qabay in agagaarkaasi saldhigyo ku leeyihiin.
Hase yeeshee waxaa muuqata in haddii markii hore ay u jeedadoodu ahayd in ay Al-shabaab ay duqeeyaan in uu ka khaldamay weerarkaasi, iyadoo sidoo kale-na ay suurto-gal tahay in ciidamadda Puntland ee la sheegay in ay hagayeen ay majaro-hababiyeen.